Abbootiin Gadaa Oromoo mootummaa Woyyaanee cimsanii balaaleffatan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Abbootiin Gadaa Oromoo mootummaa Woyyaanee cimsanii balaaleffatan
Abbootiin Gadaa Oromoo mootummaa Woyyaanee cimsanii balaaleffatan
Mootummaan Woyyaanee ajjeechaa akka dhaabuu fi woraanni Oromiyaa keessaa akka baasu, ibsi kuni gaafata.
Mootummaan Woyyaanee Abbootii Gadaa Oromoo naannoo hunda irraa wolitti fidee guyyaa sadiif haala yeroo irratti marii geggeessaa tureera. Mariin kuni Hagayya 30 – Fulbaana 01, 2016 tti iddoo bashannannaa Soodaretti kan geggeeffame. Dhuma wolgayii kanatti Abbootiin Gadaa ibsa ijjannoo baasaniiru.
Mootummaan Woyyaanee kaayyoo Abbootii Gadaa wolitti qabeefitti kan hin milkaaye hin fakkaatu. Kasaaraan guddaan Woyyaanee mudatuu isaati, gama siyaasaatiin, kan ibsa ijjannoo Abbootii Gadaa irraa hubatamu. Ibsi ijjannoo kuni mootummaan Woyyaanee ajjeechaa akka hatattamaan dhaabuu fi woraanni Oromiyaa keessaa akka bayu gaafata.
Ibsi ijjanno kuni kan dabalataan ifa taasise Oromoon hiree argate hundatti dhimma bayuudhaan diina afoo dhaabachu fi haqa Oromoo ifatti dubbachuuf murteessuu isaati.
Ibsa Ijjannoo Abbootii Gadaa Oromoo
Ibsi ijjannoo Abbootii Gadaa qabxii 13 uf keessaa qabu akka asii gaditti dhiyaataniiruu dubbisaa.
Ummatni Oromoo kamiyyuu godiinaan, aanaan, gandaan, amantiinii fi ilaalcha siyaasaatiin osoo wal hin qoodiin gaaddisa Sirna Gadaa jalatti duudhaa Sirna Gadaa Oromootiin tokkummaa keenyaan Gadaa keenya ni jabeeffanna.
Waraanni mootummaa Fedreraalaa daangaa biyyattii eeguurra taree, seeraan ala daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa cabsee seenuun, kutaawwan Oromiyaa adda addaa irra qubatee jiru, waraanni kunis aadaa, duudhaa fi afaan ummatichaa waan hin beekneef hubaatii fidee jira, akkaata Sirni Gadaa kaa’uun hogganaan waraanaa Abbaa Duulaa jedhamu dhaabbannee isa jalattiimmoo kuusaa, dabballee fi foolleedhaan rakkoowwan naannoo keenyaa kamirrattuu akka ofii keenyaan furannu ummata keenyaaf dhaamsa dabarsaa; waraanni kun akka nurraa kahu mootummaa federaalaa ni gaafanna.
Namoonni dhiiga Oromoo taatanii lammii keessan ajjeestanii fi ajjeesaa turtan, waan hamaaf dabarsitanii kennitan sobaaf raga baatan, guyyaa har’aatii kaasee yaa’ii tokkummaa Abbootii Gadaa Oromoo kun maqaa uummata Oromoo kabajamaa fi guddaatiin badii darbeef dhiifama gaafattanii, dhugaa lammii keessaniitiif akka dhaabbatan isinii dhaamaa. Kanarra kan darbe kana booda gocha kana irra deebitanii yoo raawwattan lafee fi dhiigni ilmaan Oromoo, akka safuu fi safeeffannaa Sirna Gadaatiin kan isin gaafatu taha.
Hojii dhabdummaa Naannoo Oromiyaatti babal’ataa jiruufi naannoowwan magaalotaa fi Finfinnee jirurratti dargaggoota yuniversitii fi koollejii irraa eebbifamaniif rakkoo hojiidhabdummaatiin dararaman haalli mijachuun deeggersi barbaachisaa tahe akka godhamuuf ni gaafanna.
Nuti uummatni Oromoo sabaa fi sablammiiwwan jiran waliin nagaan jiraachuu barbaadna. Sababa daangaan keenya sharafamaa jiruuf uummatni keenya sabaa fi sablammiiwwan ollaa jiruun walitti bu’aa jira. Kanaafuu,mootummaaan kara lachanuu ilaaluun furmaata akka kennuuf ni gaafanna.
Sirni Gadaa Oromoo faajjii mataa isaa:- Gurraacha,, Diimaa Fi Adii kan qabu dha.kanaafuu ummatni Oromoo fi ummatni Ayyaana Irreechaa fuuldura keenyaa kamirratuu kabajamu irratti Faajjii kanaan ala alaabaa dhaaba siyaasaa kamiyyuu qabatee akka hin dhufne ni akeekkachiisna.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa tahuun akka tahu ni gaafanna.
ibsa abbootii gadaa
oduu hiriira har'aa
Previous articleDhaabbileen mirga namaaf falman ajjeechaan Itoophiyaa keessatti geggeeffamu qaama walabaan akka qoratamuuf waamicha dhiyeessan
Next articleManni hidhaa Qiliinxoo gubataa jira; haalli Baqqalaa Garbaa fa’a yaachisaa ta’era